Scalarians - mifanaraka amin'ny trondro hafa
Ny scalarianina dia trondro tsara tarehy sy tsy misy lolo . Ny endriny sy ny maha-izy azy dia miorina amin'ny endriky ny vatany sy ny loko misy azy. Ireo trondro ireo dia matevina ary mifanaraka amin'ny ravina nofinofisina. Ho an'ireo mpanjono mpandidy, ny fikarakarana ny lokony dia safidy tsara ho an'ny fanandramana voalohany. Ny haben'ny mari-pahaizan'ny mararirary dia ampy 22-26 ° C. Ankoatra izany, dia milefitra amin'ny 18 ° C izy ireny. Afaka mamahana azy ireo amin'ny karaoty sy amin'ny sakafo maina ianao. Na izany aza, ity farany dia tokony hofidina amin'ny fijerena ny rafitry ny vatan'ny trondro. Ny zava-marina dia ho sarotra be izany, ary mety tsy hainy ny mihinana sakafo avy any ambanin'ny faritry ny trondro aquarium noho ny toetrany ara-batana. Noho izany, mila mifidy sakafo izay mety hidina tsikelikely.
Miaina ela ny scalarians. Hatramin'ny 10 taona. Misy tranga roa izay avo roa heny. Ny habetsahan'ny Aquarium dia azo fidiana ho kely na lehibe. Na izany aza, tokony ho tsaroana fa ny haben'ilay akquarium dia miankina amin'ny halehiben'ny trondro, ny lehibe kokoa ny aquarium, ny nihabetsahan'ny trondro. Na izany aza, na dia ny biby an-dranom-borona amorontsiraka aza dia tsy liana amin'ny fambolena "volafotsy velona" iray amin'ny karazana iray, noho izany dia manontany ny momba ny fiaraha-miasan'ny scalar amin'ny trondro hafa.
Amin'ny ankapobeny, ireo scalars dia mandeha tsara amin'ny mponina hafa ao amin'ny aquarium. Matetika anefa ireo trondro mahafinaritra ireo dia lasa lasibatry ny mpifanolo-bodirindrina. Eo amin'ny toerana voalohany, ny fanafihana toy izany dia iharan'ny rambony. Indraindray izy ireo dia manao ny anjara asan'ny mpanafika. Raha te hianatra momba ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny trondro hafa ianao dia afaka mampiasa litera manokana sy ny fijerinao manokana. Na ahoana na ahoana, mila manao izany amim-pitandremana ianao, mba tsy hanimbana ny mponina rehetra ao amin'ny aquarium. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny latabatra mba hamaritana ny fiaraha-miasan'ny scalars amin'ny trondro hafa. Na dia izany aza, misy ny fanarahana ny fitsipika.
Ny tabilao dia maneho fa ny barbs sy scalars dia manana fifandraisana feno. Na dia izany aza dia fantatra fa amin'ny fampiharana ny barbs dia tsy mitondra fifaliana be. Amin'ny herinandro dia mety ho lasa mpitsoa-ponenana mipetrapetraka ny lobolobo mahafinaritra. Amin'ny fanafihana mety hitranga amin'ny fepetra tsy miangatra. Na izany aza dia misy ihany koa ny fisian'ny fiaraha-miadana am-pilaminana sy ny fiaraha-miombon'ireo scalars sy barbs. Ny trondro dia mampiseho fandeferana mifanaraka.
Ny fiaraha-miasan'ny scalars sy ny neon
Raha mba miresaka momba ny fitovian'ny scalar sy ny neon, ny toe-javatra dia mety ny mifanohitra amin'izany. Ny neonchiki kely dia miaina anaty andian-ondry ary miorina eo afovoan'ny aquarium amin'ny farany ambany. Na izany aza, indraindray ianao dia afaka mandalo trondro madinika iray, ary ny fahadisoana rehetra dia ho scalar. Amin'ny toe-javatra hafa, ireo scalars dia mety ho tapaka amin'ny sehatr'ilay akoholahy tsy misy fandinihana kely amin'ny zazakely.
Guppy sy ny fitovitovy amin'ny skalar
Ao anatin'ilay adihevitra momba ny fampifanarahana ny scalar sy guppies, mila mametraka mince mavesatra ianao. Satria ireo karazana roa ireo dia afaka miara-miadana amim-pilaminana raha tsy mafana ny guppies. Amin'ity tranga ity, tony ary, heverina fa, ireo scalars tahotra dia hanao fihetsika tsara ho azy ireo. Na izany aza, raha vao mihamitombo ny trosa, dia lasa mpihaza amin'ny guppies ny trondro trlegmatika. Raha te-hamonjy ny zatovo ianao, dia arotsaho haingana any amin'ny efitra fisakafoanana izy ireo.
Tsara homarihina fa eo amin'ny fiainana dia misy ny tranga miavaka foana, na dia eo aza ny porofo ara-tsiansa, ny trondro mifangaro dia mety hifamono, fa amin'ny fotoana tsy voafetra kosa dia mety hiaina amim-pilaminana sy amim-pilaminana ao an-tanàna. Amin'izany dia tsy misy mahagaga ny olona, ​​ohatra, dia mitovy ny mitranga.
Cherry Shrimp - Karazana Care sy Content
Ahoana ny fomba hampianarana puppy iray amin'ny efitra fidiovana ao amin'ny trano?
Ahoana ny hanomezana mpiandry alemà iray?
Mitondra kitapo ho an'ny alika
Iza no alika hisafidy trano?
Kilalao ho an'ny saka manokana
Ahoana ny fomba hanonoana tovovavy mpiandry alemana?
15 zavatra mahazatra mampidi-doza ny fahasalamana
Akanjo fitondra amin'ny olona fahiny
Mark Zuckerberg dia naneho hevitra momba ny fisehoan'ny Facebook amin'ny "fitiavana tia"
Tess Holliday dia nanjary endrika endrika fetiben'ny lamaody Festival Curve Fashion Festival
Karazana karazana fiantohana hisafidy ho any ivelany?
Manosihosy ny vehivavy - ahoana ny endriky ny fikarakarana kandidàisinina ao an-trano?
Ny tantely inona no tena sarobidy sy ilaina?
Fitiavana ety anaty aterineto
Ny lahatsoratra mampihetsi-po momba ny fety!
Akanjo fotsy fotsy